/ Sveriges trygghetssystem
Nidaamka amaanka ee Iswiidhan
Gudaha Iswiidhan waxaa ka jirta nidaamka amaanka looguna talogalay in lagu hubsado in adigaaga halkan ku nool aad hesho lacag kugu filan iyadoo aan loo eegin xaaladaada nololeed sida ay u eegt hay.
Haddii aad wax ka baranayso gudaha Iswiidhan waxaad codsan kartaa lacag waxbarasho si aad u dabarto kharashaadkaaga. Waxaad heli kartaa kaalmo waxbarasho taas oo kala duwanaanshaheedu ku xiranyahay da'adaada oo waxaad xitaa qaadan kartaa amaah waxbarasho. Waa Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN, kuwa gacanta ku haya lacagta waxbarasho.
Waxbarashooyin iyo casharo
Gudaha Iswiidhan dhamaan shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin 25 maalmood oo fasax ah muddo sanad gudaheed ah iyadoo aan loo eegayn da'da iyo nidaamka shaqo. Waxaa la kala saaraa xaqa fasaxa iyo xaqa magdhabida. Iyadoo ku xiran xilliga sanadka ee aad bilowday shaqadaada ayaa la waafajiyaa magdhabida xilliga fasaxa, waxaad xitaa fasax ahaan kartaa adigoo aan helin lacag. Fasaxa waxaa loogu talogalay inaad ku nasato kuna soo kabato.
Shaqaale - ku saabsan fasaxa
Baarlamaanka - ku saabsan sharciga fasaxa
Fasax ka qaadasho shaqo – fasax bilaa lacag ah
Waxaad codsan kartaa inaad fasax ka ahaato shaqada dhanka shaqo-bixiyahaaga si aad hakad ugu samayso shaqadaada oo aad ku hawlanaato wax kale. Laga yaabee inaad doonaysid inaad waxbarato, tijaabiso xirfad kale, bilowdo shirkad gaar kuu ah ama aad daryeesho qof qaraabo ah oo kuu dhow. Ka dib fasax kaga maqnaanshaha shaqo waxaad xaq u leedahay inaad dib ugu noqoto shaqadaada oo leh isla shuruudo la mid ah kuwii markii hore.
La eeg shaqo-bixiyahaaga ama ururkaaga shaqaalaha si aad u hesho warbixinta ku saabsan waxa adiga ku khuseeya haddii aad doonaysid inaad fasax kaga maqnaato shaqada.
Haddii aad xanuusato
Om du arbetar och blir sjuk måste du anmäla det till din arbetsgivare. Maalinta ugu horeysa ee aad xanuusanayso waxaa lagu magacaabaa maalinta sugitaanka, markaasi ma helaysid wax lacag ah. Maalinta xanuunka ee 2 ilaa 14 waxaa shaqo-bixiyahaagu ku siinayaa mushahaarada bukaanka. Mushahaarada bukaanka waa boqolkiiba 80 ah mushahaaradaada. Haddii aad xanuusanayso in ka badan 14 maalmood markaas Qasnada Caymiska ayaa la wareegaysa lacag bixinta mushahaaradaada xanuunka.
Qasnada Caymiska - xanuun
Waalid cusub ahaan waxaad xaq u leedahay inaad guriga la joogto ilmahaaga ilaa inta uu buuxinayo sanad iyo bar. Magdhabkaaga xilliga fasaxa waalidnimo waxaa lagu magacaabaa gunnada waalidka oo waxaa bixisa Qasnada Caymiska. Magdhabkani wuxuu ku salaysanyahay mushahaaradaada iyo faa'iidooyinka kale ee laga helo shaqo-bixiyaha. Caymiska waalidka wuxuu khuseeyaa hooyooyinka iyo aabayaasha labadaba. Saddex bilood ayaa kayd u ah mid kasta oo waalidka ka mid ah.
Qasnada Caymiska - Waalidka
Lacagtaada hawl-gabka ee mustaqbalka waxaa raad ku yeesha inta ay leegtahay fasaxa waalidnimo ee aad qaadato maadaama tani ku salaysantahay inta lacag aad shaqaysay noloshaada shaqo.
Hey'ada lacagaha hawl-gabka - Maxaa raad ku yeesha lacagtaada hawl-gabka?
Haddii ilmahaagu xanuusado
Haddii ilmahaagu xanuusado waxaad xaq u leedahay inaad fasax ka ahaato shaqada oo qaadato gunada waalidka ee ku meel gaarka ah ilaa iyo inta ilmahani buuxinayo 12 sano. Magdhabidani waa qiyaastii boqolkiiba 80 ah dakhligaaga. Maalin shaqo markay tahay waxaanu tani ku magacawnaa vab, daryeelka ilmo. Hooyooyinka iyo aabayaasha labaduba xaq ayay u leeyihiin inay fasax ku ahaadaan daryeelka ilmo.
Qasnada Caymiska - daryeelka ilmo xanuusanaya (VAB)
Shaqo la'aan qaata qasnada shaqo la'aanta
Qasnada shaqo la'aanta waa magdhabid aad heli karto haddii aad tahay bilaa shaqo. Dhinaca xirfadaha badankooda waxaa ka jirta qasnada shaqo la'aanta. Haddii aad xubin ka tahay qasnad shaqo la'aan waxaad heli kartaa ilaa iyo boqolkiiba 80 ah mushahaaradaada oo magdhabid ah haddii aad noqoto bilaa shaqo.
Magdhabida laga helo qasnada shaqo la'aanta
Lacagta hawl-gabka waa lacagta aad ku noolaanayso maalinta aad joojiso inaad shaqayso. Lacagtaada hawl-gabka waxay badanaaba ka koobantahay saddex qaybood – lacagta hawl-gabka ee guud, lacagta hawl-gabka ee shaqada iyo wixi ahaan kara kayd la dhigta. Marka aad qaadato fasax waalidnimo waxay raad ku yeelan kartaa dakhliga iyo lacagtaada hawl-gabka. Lacagta guud ee hawl-gabka waa lacag hawl-gab dawladeed taas oo Hey'ada Lacagaha Hawl-gabku ay mas'uul ka tahay. Waxaad xaq u leedahay inaad qaadato lacagta hawl-gabka ee guud xilliga da'da 61 sano, laakiin waxaad xitaa dooran kartaa inaad shaqayso ilaa inta aad noqonayso 67 sano.
Hey'ada Lacagaha Hawl-gabka - faham lacagtaada hawl-gabka
Shaqo madow iyo cadaan ah
Waa sharci daro in lagu shaqeeyo madow
In lagu shaqeeyo madow micnaheedu waa in shaqo-bixiyahaagu aanu bixin wax ah kharashyada bulshada oo laguugu talogalay iyo in sidaasi adigu aanad wax canshuur ah ka bixin dakhligaaga. Hey'ada Canshuuraha ayaa kaa dalban karta canshuurti aanad bixin, waa sharci daro in lagu shaqeeyo madow oo waxay keeni kartaa xabsi ah ilaa iyo laba sano.
Ku shaqee si cadaan ah
Haddii taas badelkeeda aad shaqayso, bixiso canshuur kuna shaqayso si cadaan ah, waxaad helaysaa dhamaan faa'iidooyinka nidaamka amaanka ee Iswiidhan.
Hey'ada Canshuuraha - natiijooyinka shaqo madow ah
Hey'ada Canshuuraha - sidan ayaad ugu shaqaynaysaa si cadaan ah
Ma doonaysaa inaad ka shaqayso Iswiidhan?
Warbixin ku qoran Ingiriisi kuna saabsan in laga shaqeeyo Iswiidhan.